Torohevitra hampihenana ny mari-pana entin'ny rivotra entin'ny genset anao
Amin'ny ankapobeny, ny lesoka amin'ny gensety dia azo sokajiana karazana maro, ny iray amin'izy ireo dia antsoina hoe fidiran'ny rivotra. Ahoana ny fomba hampihenana ny mari-pana amin'ny rivotra iainana ao amin'ny setin'ny mpamokatra gazoala Ny mari-pana coil ao anaty ny génélie diesel dia tena avo lenta, raha avo loatra ny mari-pana amin'ny hafanan'ny rivotra, ...Hamaky bebe kokoa »
Inona no atao hoe Generator Diesel?
Inona no atao hoe Generator Diesel? Amin'ny alàlan'ny fampiasana motera diesel miaraka amina mpamokatra herinaratra dia ampiasaina ny mpamokatra gazoala hamokarana angovo herinaratra. Raha misy ny tsy fahampian'ny herinaratra na amin'ny faritra izay tsy misy ifandraisany amin'ny tariby herinaratra dia azo ampiasaina ho loharanon-kery vonjy maika ny mpamokatra gazoala. ...Hamaky bebe kokoa »
DEUTZ dia mampiditra Warranty amin'ny Fiainana Mandria
Fotoana fandefasana: 01-26-2021
Cologne, 20 janoary 2021 - kalitao, azo antoka: ny Warranty momba ny fiainana andavanandron'i DEUTZ dia maneho tombony manintona ho an'ireo mpanjifany aftersales. Manomboka amin'ny 1 Janoary 2021, ity fiantohana maharitra ity dia azo zahana amin'ny faritra fanampiny DEUTZ izay novidiana ary napetraky ny tompon'andraikitra DE ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana famoahana: 11-27-2020
Vao tsy ela akory izay, nisy vaovao vaovao eran-tany teo amin'ny sahan'ny maotera sinoa. Weichai Power dia namorona ny gazoala diesel voalohany miaraka amin'ny fahombiazan'ny hafanana mihoatra ny 50% ary mahatsapa ny fampiharana ara-barotra eto amin'izao tontolo izao. Tsy ny fahombiazan'ny hafanan'ny vatan'ny motera ihany no mihoatra ny 50%, fa afaka mora foana koa ...Hamaky bebe kokoa »
Ho an'ny mpamokatra gazoala vaovao, ny faritra rehetra dia faritra vaovao ary tsy mifanaraka amin'ny laoniny ny haavon'ny fanambadiana. Noho izany, ny fihazakazahana amin'ny asany (fantatra koa amin'ny hoe fihazakazahana dia tokony hotanterahina). Ny fihazakazahana miasa dia ny fampandehanana ny generator gazoala mandritra ny fotoana voafaritra ...Hamaky bebe kokoa »